Moyo wakura zvakadii, wakafara sei mugwagwa. Basa: kukura uye kusimba muindasitiri yemagetsi yenyika uye yepasi rese, kugara uchivandudza hupenyu hwevanhu. Maitiro: kutevedza kutendeseka, kutsigira shanduko. Bhizinesi uzivi: Wakare sei moyo, wakafara sei mugwagwa. Con ...
Chii chinonzi voltage stabilizer: Voltage stabilizer chishandiso mumagetsi ouinjiniya yakagadzirirwa kuchengetedza otomatiki voltage. Anogadzirisa anogona kunge ari e "feedforward" dhizaini yakapusa kana inogona kunge iine yakashata mhinduro yekudzora chiuno. Servo mota kudzora kana kudzosera kudzora kwe ...
Nekuuya kwerutsva nyowani yesimba rekudyara boom
Nekuuya kweshanduro nyowani yesimba rekudyara boom, simba rekufambisa uye shanduko michina inogadzira ichave izere masimba mumakore mashoma anotevera, ichiratidza kuwedzera mukugadzirwa nekutengesa uye mamiriro akabudirira kwazvo. Sebazi rakakosha rekufambisa kwesimba uye distri ...
© Copyright - 2010-2020: All Rights Reserved. Matipi - Zvinowanikwa Zvigadzirwa - Sitemap - Mobile Site Voltage Stabilizer Ye Amplifier, Voltage Inogonesa 5000va, Voltage Stabilizer YeImba Yese Imba, Dhijitari Voltage Inodzikamisa For Ac, 2kva Voltage Inodzikamisa, 4kva Voltage Inodzikamisa, Zvese Zvigadzirwa